सेमिफाइनलमा पुग्ने भाग्यशाली ४ टिम, को पुग्ला फाइनलमा ? यस्तो छ विगत – Everest Dainik – News from Nepal
सेमिफाइनलमा पुग्ने भाग्यशाली ४ टिम, को पुग्ला फाइनलमा ? यस्तो छ विगत
मस्को । रसियामा भइरहेको २१औं विश्वकप फुटबलमा अन्तिम ४ मा पुग्ने टिमको छिनोफानो भएको छ । गयराती भएको क्रोएसिया र रसियाबीचको खेल सकिएसँगै अन्तिम ४ मा पुग्ने टिमको छिनोफानो भएको हो ।
यो पटकको सेमिफाइनलमा फ्रान्स, बेल्जियम, इंग्ल्यान्ड र क्रोएसिया पुग्न सफल भए । यी चार टिममध्ये फ्रान्स र इंग्ल्याण्ड विश्वकपको पूर्व विजेता हुन्, भने बेल्जियम र क्रोएशियाले हालसम्म उपाधि जित्न सकेका छैनन् । सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएसँगै उपाधि दौड खूब रोचक बनेको छ । रोचक यसकारण बनेको छकि उपाधिका दाबेदार भनिएका टिम घर फिर्ता भइसकेका छन् ।
पाँच पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिल, ४ पटकको विजेता जर्मनी, समान २-२ पटक विश्वकप जितेका अर्जेन्टिना र उरुग्वे तथा एक पटक विश्वकप विजेता स्पेन जारी विश्वकपबाट घर फर्कि सकेका हुन् । अब यो संस्करणको उपाधि चार टिममध्ये कोले जित्ला ? निकै उत्सुक्ताकासाथ हेरिएको छ ।
यो पटक फुटबल पण्डितहरुले गरेको अनुमान पनि फिक्का छ । त्यसकारण पनि उपाधि भिडन्त निकै रोचक बन्ने अपेक्षा छ । यो पटकको उपाधि जसले जिते पनि नयाँ इतिहास भने पक्कै कोरिने छ । सेमिफाइनल भिडन्त-
फ्रान्स भेर्सेस बेल्जियम
जारी विश्वकपको पहिलो सेमिफाइनल भिडन्त फ्रान्स र बेल्जियमबीच हुनेछ । यी दुइटिमबीचको खेल पर्सि (मंगलबार) हुने छ । दुवै टिम इतिहास रच्न आँतुर छन् । रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा हुने फ्रान्स र बेल्जियमबीचको सेमिफाइनल खेल पौने १२ बजे हुनेछ ।
क्रोएसिया भर्सेस इंग्ल्यान्ड
रसियामा जारी विश्वकपको दोस्रो सेमिफाइनलमा क्रोएसिया र इंग्ल्यान्डबीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यी दुर्यटिम बीचको खेल आउँदो बुधबार मस्कोस्थित लुज्हनिकी रंगशालामा हुनेछ । खेल राति पौने १२ बजे हुने छ ।
पूर्व विजेता २ राष्ट्र
अन्तिम ४ मा विश्वकप जितेका दुई राष्ट्र मात्रै छन् । फ्रान्सले सन् १९९८ मा आफैँले आयोजना गरेको विश्वकप फुटबलको उपाधि उचालेको थियो । फ्रान्सले फाइनलमा ब्राजिललाई ३–० गोलले पराजित गर्दै सन् १९९८ मा पहिलो पटक विश्वकपको उपाधि उचालेको थियो ।
त्यसयता फ्रान्सले विश्वकपको उपाधि उचाल्न सकेको छैन । त्यस्तै, इंग्ल्यान्डले पनि सन् १९६६ मा आफैँले आयोजना गरेको विश्वकप फुटबलको उपाधि उचालेको थियो । विश्वकपको फाइनल खेलमा इंग्ल्यान्डले जर्मनीलाई ४-२ गोलअन्तरले पराजित गर्दै पहिलो पटक विश्वकपको उपाधि चुमेको थियो । त्यसपछि इंग्ल्यान्डले अहिलेसम्म विश्वकपको उपाधि चुमेको छैन ।
उपाधि दौडमा यी दुई राष्ट्र
यो पटकको विश्वकपको उपाधि दौडमा दुई नयाँ राष्ट्र रहेका छन् । बेल्जियम र क्रोएसियाले अहिलेसम्म विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेका छैनन् । त्यसो त, यी दुई टिम अहिलेसम्म फाइनलमा पुग्न सकेको छैन । बेल्जियम जारी विश्वकप फुटबलमा दमदार प्रदर्शन गर्दै सेमिफाइनलसम्म आइपुगेको छ । बेल्जियमले सेमिफाइनलसम्मको यात्रा पार गर्दा ठूला राष्ट्रलाई पराजित गरेको छ ।
क्वाटरफाइनलमा बेल्जियमले बलियो टिम ब्राजिललाई २-१ गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । त्यस्तै, जारी विश्वकपमा अपराजित रहेको बेल्जियमले प्रिक्वाटरफाइनलमा जापानलाई ३-२ गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो । समूह चरणमा भने बेल्जियमले आफ्नो खेलमा पानामालाई ३-० ले, दोस्रो खेलमा ट्युनिसियालाई ५-२ गोलले र अन्तिम खेलमा इंग्ल्यान्डलाई १-० गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो ।
बेल्जियम यो भन्दा अघि सन् १९८६ मा भएको विश्वकपको सेमिफाइनलसम्म पुगेको छ । बेल्जियमले अहिलेसम्म विश्वकपको सेमिफाइनलभन्दा अघिको यात्रा पार गरेको छैन । त्यसैले यो पटक बेल्जियम इतिहास रच्ने दाउँमा छ । जारी विश्वकप फुटबलमा क्रोएसियाले शानदार प्रदर्शन गर्दै सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको हो ।
क्रोएसिया २० वर्षपछि विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको हो । यसअघि सन् १९९८ मा क्रोएसिया विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको थियो । क्रोएसियाले भने आफ्नो पहिलो खेलमा नाइजेरियालाई २-० गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो ।
त्यस्तै, दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिनालाई ३-० र अन्तिम खेलमा आइसल्यान्डलाई २-१ गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो । प्रिक्वाटरफाइनलमा भने क्रोएसियाले डेनमार्कलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३-२ गोलले पराजित गर्दै क्वाटरफाइनलमा पुगेको थियो । क्वाटरफाइनलमा आयोजक रसियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४-३ गोलले पराजित गर्दै सेमिफाइनलसम्मको स्थान बनाएको हो । -एजेन्सी
ट्याग्स: Belguam, Fifa world cup 2018, france, क्रोएसिया भर्सेस इंग्ल्यान्ड, फ्रान्स भेर्सेस बेल्जियम